Muxuu ka yiri Lautaro Martínez wararka la xiriirinaya Barcelona?… (Laacibka reer Argentina oo ugu dambeyn afka kala furay) – Gool FM
(Milano) 27 Feb 2021. Weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez ayaa xaqiijiyay inuu go’aansaday inuu qandaraaska u cusbooneysiinayo Nerazzurri isla markaana uusan u dhaqaaqi doonin naadiga Barcelona.
Lautaro Martínez ayaa sheegay, kaddib wareysi uu siiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga:
“Waxaa jiray wadahadalo aan kula jiray Barcelona, laakiin ma garanayo sida ugu dhow ee aan ugu biirayo kooxdan.”
“Laakiin waxaan aad ugu cadeeyay Antonio Conte, waxaana ku dhahay (Waxaan diirada saarayaa halkan … waa balan inaan wax saameyn ah ku yeelan doonin), balse tani hadda waa wax laga soo tagay.”
“Waxaan qandaraaska u cusbooneysiin doonaa Inter .. Goorma ayaan ku dhawaaqi doonaa taas? Ma aqaan.. waxay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan mudadan, laakiin mustaqbalkeygu waa halkaan, waxaan isku arkaa aniga inay tahay in kooxda aan sii joogo muddo dheer.”
“Waan jeclahay wax walba oo magaaladan ka jira, cuntada, xiriirka taageerayaasha iyo kooxda, kaliya waxaan halkan ku leeyahay dareen wanaagsan.”
“Maxaan ku fikirayay markii aan akhriyay faahfaahinta heshiiska Messi oo ay Barcelona siisay 550 milyan oo euro? Ma aanan aqrin… Laakiin qoyskeyga ayaa ka hadlay arintaan. Arintaan ma ahan wax fiican.”
“Yuu noqon doonaa badalka Messi? Aniga ahaan, Messi wuxuu lamid yahay Maradona, ma jiro qof isaga oo kale ah oo gadaal ka imaan doona.”